Ungamnika yiphi incwadi ...? | Izincwadi Zamanje
Ungamnika yiphi incwadi ...?
UCarmen Guillen | | Amabhuku, Literatura, eziningana
Kuyasondela, kunuka ... Kusasa, ekugcineni, uSuku Lwezincwadi futhi iningi lethu ngeke lisizakale ngokuzithengela le ncwadi eyinqaba kuphela kodwa futhi sizophana (cishe nakanjani) futhi sizonikela ezinye ziye komunye umuntu othandekayo.
En Izincwadi Zamanje sifuna ukwenza umsebenzi wakho ube lula futhi sikunikeze uchungechunge lwe iziphakamiso ngokusho komuntu esifuna ukumupha njengesipho. Uma ufuna imibono, nansi indawo yakho.
1 Iyiphi incwadi ongayinika umlingani wakho?
1.1 Uma umlingani wakho eyintombazane ...
1.2 Uma umlingani wakho engumfana ...
2 Iyiphi incwadi ongayinika abazali bakho?
3 Iyiphi incwadi ongayinika abangane bakho?
3.1 Okomngane wakho womphefumulo ...
3.2 Okomngane wakho womphefumulo ...
Iyiphi incwadi ongayinika umlingani wakho?
Ukuba nomlingani ozohamba nathi ngolunye usuku ntambama kusofa nencwadi esandleni kuhlale kumnandi, okungenani kubathandi bokufunda njengathi, sithanda ukubona umlingani wethu eceleni kwethu ehlanganyela ngaleso sikhathi. Futhi uma engakwenzi futhi ukulangazelela, lokhu kungaba yisipho esihle ukumtshela.
Akunakusho ukuthi kufanele wazi, noma kancane, ifayela le- ukunambitheka kwemibhalo komlingani wakho ukuze akwazi ukumnika incwadi. Uma kungenjalo, futhi awunaso isikhathi sokuthola, cwaninga kulabhulali yakhe.
Uma umlingani wakho eyintombazane ...
"Abesifazane abafundayo bayingozi" de UStefan bollmann: Mhlawumbe intombi noma unkosikazi wakho uzokubuka ngokumangazayo ekuqaleni nje lapho ubona isihloko sale ncwadi, kodwa njengoba ngiyifunda ngineqiniso lokuthi uzosithokozela lesi sipho. Kuyincwadi ukuthi uhlonipha bonke labo bafundi besifazane: Ngokwesiko ukwehliswa kwendima yesibili nokuvame ukwenziwa emphakathini, abesifazane bathola kusenesikhathi ekufundeni indlela yokwephula ubuncane bomhlaba wabo. Umnyango ovulekile wolwazi, ukucabanga, ukufinyelela kwelinye izwe, izwe lenkululeko nokuzimela, ubavumele ukuthi bathuthukise futhi bamukele, kancane kancane, izindima ezintsha emphakathini. Ngokuvakasha kwemisebenzi eminingi yobuciko ekhombisa ubudlelwano obusondelene phakathi kwezincwadi nabesifazane, uStefan Bollmann ukhokha isigqoko esivela enhliziyweni kwabesifazane futhi uqinisekisa amandla ahlukile anikezwa ukufunda. Ngaphandle kokungabaza, kungaba ukuthenga okuhle.
"Uthando, abesifazane nokuphila" de UMario Benedetti: Akukho okungcono njengoku izinkondlo zezipho kowesifazane othandana naye, futhi uma kungokaBenedetti, konke kungcono. Kule ncwadi, uMario uhlanganisa izinkondlo zothando ezinhle kakhulu ezibhaliwe, lapho eguqula khona umqondo wakhe wokuphila nothando, njengomthombo oyinhloko wamandla oqondisa umuntu.
"Ukumamatheka kwabesifazane" de UNicolas Barreau: Eyodwa inoveli entsha, yothando lwesisa kepha futhi kwehluke kakhulu. Ngincoma le noveli, ngaphezu kwakho konke, ngoba ilula kakhulu futhi ifundeka kamnandi kakhulu ngoba kunokuxhumana okuningi phakathi kwabalingiswa bayo.
Uma umlingani wakho engumfana ...
"UBruce Lee, jeet kune do": Le ncwadi ithanda cishe bonke abafana kodwa ikakhulukazi labo abathanda ukunakekela imizimba yabo futhi abenza imidlalo ethile yokuxhumana. Ingxenye engcono kakhulu ukuthi ibhalwe nguBruce Lee uqobo, efingqa imigomo yakhe, amasu ayisisekelo, nezinhlelo zezifundo. Imidwebo ekhombisa uLee kanye nokwelashwa kwakhe okungajwayelekile ngohlobo lwempi, impumelelo ngezobuciko, kanye nokubaluleka kwesimo sengqondo esihle ekuqeqeshweni nakho kuyakhonjiswa.
«I-cruise yasehlobo» de Truman capote: Okwabesilisa abathandayo ukulandisa kweCapote enkulu. Yincwadi okumele siyifunde sonke, kungakhathalekile ubulili. UGrady McNell oneminyaka eyishumi nesikhombisa ukwazile ukukholisa abazali bakhe ukuthi bamshiye bodwa phansi eCentral Park ngenkathi behamba ngesikebhe sasehlobo. Akekho ongachaza ukuthi kungani le ntokazi inciphisa injabulo yaseYurophu ngehlobo laseNew York elishisayo. Kepha uGrady unemfihlo: uyathandana. Futhi uthando lwakhe okufanele lweqe izithiyo ezinamandla kakhulu. Ngoba uGrady, owazalelwa phezulu phezulu ezingeni lezenhlalo, uthandane noClyde Manzer, umfana oneminyaka engamashumi amabili nantathu ubudala osebenza endaweni yokupaka lapho egcina khona imoto yakhe. Futhi uClyde ungumJuda, umakadebona empini - sikuma-1940s, ngemuva nje kokuphela kweMpi Yezwe II - futhi abasezingeni eliphansi kakhulu. Futhi njengoba ihlobo liqhubeka, nobuhle bemizimba bukhula, yini eyaqala njenge | Ukuthandana kwezikhathi zeholide, kuzoba kubi ngokwengeziwe, kucace kakhulu, kube nokulingana ...
"Okuphangiwe kwempi" de Ha jin: Okwalabo abathandayo ukulandisa okunemibono yomlando neyempi. Ngo-Mashi 1951, behlome ngezikhali zaseRussia, isigaba esincane seChinese People's Liberation Army sawela uMfula iYalu njengesiqiniseko samasosha ekuhlaselweni yiMaoist elwa neSouth Korea. Ngokumasha kwayo isikhulu esisesisha u-Yu Yuan, obekufanele ashiye ngemuva umama nentombi yakhe aye empini engaqinisekile futhi azophuma kuyo eyisiboshwa sempi yebutho laseMelika. Uvalelwe enkanjini yasejele lasePusan, kwathi kamuva esiqhingini saseKoje, eSouth Korea, nokho uthola ukuthi amaShayina axhasa izwe kanye namaKorea angongoti kakhulu kunabantu baseNtshonalanga kubuciko bokubazwisa ubuhlungu bakithi. Ngaphezu kwalokho, lapho impi seyiphelile, iChina esongela ukuphindisela ababaleki nabathengisi yenza ukulinda endaweni okungekho muntu-kuyo nesikhathi kube yiphupho elingapheli.
Iyiphi incwadi ongayinika abazali bakho?
Kunzima ukubapha abazali ... Bayasazi ngokuphelele futhi imvamisa balungile ngezipho zabo, kepha sihlala sinokungabaza ukuthi bangazithanda yini izipho. Mhlawumbe ngoba sihlala sithola okuncane esingabanika kona. Ngiyethemba ukuthi kulokhu neziphakamiso zethu, kepha uyazi ukuthi ezincwadini, konke kuyindaba yokunambitheka.
Ngomama ungayithola kahle izincwadi zokupheka… Iningi labo liyathanda ukupheka nokuthola izindlela ezintsha zokupheka nezitsha ukusimangaza ngazo. Kubo sincoma incwadi ka "Ikhishi le-pop le-foodman" de UMikel Lopez, i-blogger ye-gastronomic osilethela izindlela zokupheka ezintsha nenkampani ye-cinema enhle, umculo nesiko le-pop.
Futhi uma okufunayo ukumenza ahleke, okuhlala kukuhle futhi kuza kahle, ungamnika "Ungabi kanjani ngumdlalo wedrama mama" de Amaya ascunce. Le ncwadi iqukethe amabinzana angama-101 ashiwo yibo bonke omama ezimpilweni zabo futhi ngasikhathi sinye bazonda lapho omama babo bekusho. Incwadi emnandi kakhulu!
Yini umzali angayithandi ezemidlalo? Ukusuka lapho sesiyakwazi ukuthola imibono. Incwadi ebhalwe ngabakhe Umsubathi oyintandokazi kungaba isipho esihle kuye. Noma uma kuyi- umthandi wobuchwepheshe futhi inencwadi ye-elekthronikhi esingayenza njengesipho esikhulu nge I-5 o-6 ebooks abangayithanda njengenoveli yomlando, inoveli yobugebengu, njll.
Mhlawumbe okuthanda kakhulu umnotho. Uma kunjalo, sincoma "Inhlokodolobha: Ukuhlaziywa Komnotho Wezepolitiki" de UKarl Marx.
Iyiphi incwadi ongayinika abangane bakho?
Okomngane wakho womphefumulo ...
Kulowo mngani wakho ohlale ekhona lapho umdinga, yisiphi isipho esingcono kunaleso ahlekise. Ngalesi sizathu sincoma njengesiphakamiso sesipho incwadi esanda kukhishwa ye- UMarta Gonzalez de Vega isihloko «Kusuka eLittle Red Riding Hood kuya kuShe-Wolf komalume abayisithupha kuphela», uhlobo lwencwadi ehlekisayo abesifazane kuphela abangathola ukuhlekisa kuyo. Siyaqiniseka ukuthi uzoyithanda.
Kulowo mngani ufuna ukuthola i- injabulo Okokuqala, yisiphi isipho esingcono kunesinye sezincwadi ezithengiswa kakhulu emlandweni, ngekhwalithi yaso, ngemifanekiso yaso, yokufunda impilo ehlose ukuyikhombisa: "INkosana encane" de U-Antoine de Saint-Exupéry. Indaba elandiswa ngokulula nangezinkondlo lapho kuhlaziywa khona izihloko ezifana nencazelo yempilo nencazelo yothando nobungane.
Sifisela wena usuku oluhle lwezincwadi! Futhi njengoba esho Miguel de Unamuno «CUma ufunda kancane, kulapho umonakalo omkhulu wenza lokho okufundayo ".
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Ungamnika yiphi incwadi ...?
Nginganikeza wonke umuntu iPhasiji eya eNdiya, ngu-EM Forster.
Izincwadi zamanoveli zobugebengu ezilinganiswe kakhulu ngabafundi